कोरियन एयर अवदेखी कोरियाबाट हरेक बुधबार काठमान्डौँका लागी उडने ! – Korea Pati
September 9, 2021 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on कोरियन एयर अवदेखी कोरियाबाट हरेक बुधबार काठमान्डौँका लागी उडने !
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेप्टेम्बर महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ तालिका अनुसार अब काठमाडौंबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका लागि सातामा १० उडान हुने भएको छ । यूएईको सारजहा विमानस्थलबाट एयर अरेवियाले हरेक दिन दुई उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ ।
एयर अरेवियाकै जहाज आबुधाबीबाट समेत हरेक दिन काठमाडौं आउन पाउने गरी अनुमति पाएको छ । फ्लाई दुबईको जहाज दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट सातामा १० उडानसहित काठमाडौं आउने छ ।
हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको क्वालालाम्पुर विमानस्थलमा साताको ६ उडान (सोमबारबाहेक) गर्नेछ । दुबई विमानस्थलमा हिमालयको जहाजले शुक्रबारबाहेक साताको ६ उडान गर्नेछ । कतारको हमाद इन्टरनेशनल विमानस्थटलमा हिमालयको जहाजले सातामा कुल ७ उडान गर्ने गरी अनुमति पाएको छ ।
जजिरा एयरवेज कुवेतबाट हरेक दिन एक उडान लिएर काठमाडौं आउने छ । दक्षिण कोरियन एयरको जहाज दक्षिण कोरियाबाट हरेक बुधबार काठमाडौं आउने गरी अनुमति पाएको छ ।मलेसिया एयरलाइन्सको जहाज हरेक शनिबार क्वालालाम्पुरबाट काठमाडौं आउने भएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले कतारको हमाद इन्टरनेसनलमा हरेक दिन एक उडान गर्नेछ । दुबई इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट नेपाल एयरलाइन्सले सातामार चार (सोमबार, बुधबार, बिहीबार र शनिबार) उडान गर्नेछ । कुन देश कति फलाइट तालिका तल हेर्नुस् ।
दक्षिण कोरियामा विदेशी कामदार अभाव,कृषि कम्पनिहरु संकटमा !
दक्षिण कोरियामा शक्तिशाली टाईफुन आँउदै,उच्च शतर्कता अपनाउन अनुरोध !
उत्तर कोरियाली शासक किम ले थ’र्काए आफ्ना देशका यूवाहरुलाई!
April 23, 2021 April 23, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
दश दिन पछी नेपाल फर्कने तयारीमा रहेका सुर्खेतका गगन कहिल्यै नफर्किने गरी कोरियामै अस्ताए!
March 31, 2021 March 31, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरियाको ह्वासङ्गमा कबड्डी – ३ प्रदर्शन हुँदै।
October 23, 2019 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरियामा भिषा सम्बन्धी नयाँ नियम लागु (पुरा हेर्नुहोस)
September 26, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरिया जाने सपना त्यागेर एक यूवाले थाले नेपालमै व्यवसाय,लाखौँ कमाउछन !
September 25, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
कोरियामा कोरोना सङ्क्रमण अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च,छुसक मुख्य कारण !
September 24, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने
तीन करोड वन लगानी कोष सहित “उद्यमशील युवा मञ्च द. कोरिया” संस्था गठन
September 23, 2021 गुरुदत्त न्यौपाने